Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wobɔ Onyankopɔn Mpae? Nneɛma Bɛn Na Yɛbɛtumi Abɔ Ho Mpae?
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Toba) Bengali Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nea Enti a Onyankopɔn Pɛ sɛ Yɛbɔ No Mpae
Onyankopɔn pɛ sɛ ɔfa yɛn adamfo.
Nkɔmmɔbɔ ma adamfoɔ sɔ. Onyankopɔn nso pɛ sɛ yɛyɛ ne nnamfo paa, enti ɔpɛ sɛ yɛne no bɔ nkɔmmɔ. Ɔka sɛ: “Mobɛfrɛ me, na mobɛba abɛbɔ me mpaeɛ, na mɛtie mo.” (Yeremia 29:12) Sɛ wobɔ Onyankopɔn mpae a, ‘wobɛbɛn no na ɔno nso bɛbɛn wo.’ (Yakobo 4:8) Bible ma yɛhu sɛ: “Yehowa bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa.” (Dwom 145:18) Sɛ yɛbɔ Onyankopɔn mpae bere nyinaa a, ɛma yɛne no yɛ nnamfo paa.
“Yehowa bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa.”—Dwom 145:18
Onyankopɔn pɛ sɛ ɔboa wo.
Yesu kaa sɛ: “Mo mu hwan koraa na ne ba bisa no paanoo a ɔde boɔ bɛma no? Anaasɛ ɔbisa no apataa a, ɔde ɔwɔ bɛma no? Enti sɛ [monim] sɛdeɛ moma mo mma akyɛdeɛ pa a, hwɛ mprɛ dodoɔ ara a mo Agya a ɔwɔ soro no de nnepa bɛma wɔn a wɔbisa no no!” (Mateo 7:9-11) Enti, Onyankopɔn pɛ sɛ wobɔ no mpae efisɛ, ‘ɔdwene wo ho’ na ɔpɛ sɛ ɔboa wo. (1 Petro 5:7) Ɔka mpo sɛ fa wo haw bɛto n’anim. Bible ka sɛ: “Monnnwennwene biribiara nnha mo ho, na mmom momfa mpaebɔ ne nkotɔsrɛ ne aseda so mfa mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim adeɛ nyinaa mu.”—Filipifoɔ 4:6.
Wɔde ɔsom duaa nnipa mu.
Animdefo a wɔhwehwɛ nnipa asetena ho nsɛm mu ahu sɛ nnipa mpempem pii te nka sɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ mpae. Ebinom a wɔnnye Onyankopɔn nni ne wɔn a wɔntumi nhu sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ no mpo ahu sɛ mpaebɔ ho hia. * Wei kyerɛ sɛ nnipa wɔ honhom fam ahiadeɛ anaa wɔde ɔsom adua yɛn mu. Yesu kaa sɛ: “Anigyeɛ ne wɔn a wɔnim wɔn honhom mu ahiadeɛ.” (Mateo 5:3) Ɔkwan baako a yɛbɛtumi afa so anya saa ahiadeɛ no ne sɛ, yɛbɛbɔ Onyankopɔn mpae daa.
Onyankopɔn pɛ sɛ yɛbɔ no mpae. Sɛ yɛbɔ no mpae a, mfaso bɛn na yɛbɛnya?
^ nky. 8 Afe 2012 mu no, wɔyɛɛ nhwehwɛmu bi wɔ United States, na wɔhuu sɛ, sɛ yɛyi nnipa a wɔnnye Onyankopɔn nni ne wɔn a wɔntumi nhu sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ bɛyɛ 10 a, anyɛ hwee koraa no, wɔn mu baako bɔ mpae pɛnkoro bosome biara.—Pew Research Center.
Nneɛma Bɛn na Yɛbɛtumi Abɔ Ho Mpae?
Bible kyerɛ sɛ yɛbɛtumi abɔ biribiara a ɛfa yɛn asetena ho mpae. Nneɛma a yɛbɛtumi abɔ ho mpae no bi ni:
Yɛn Bɔne a Yɛbɛka “Mekaa me bɔne kyerɛɛ wo, na mankata me mfomsoɔ so.”—Dwom 32:5.
Aseda “Ɛyɛ sɛ yɛda Yehowa ase.”—Dwom 92:1.
Ayeyi “Mɛhyira Yehowa berɛ nyinaa; n’ayeyie rempa m’anom da.”—Dwom 34:1.
Akwankyerɛ “Ma mennante wo mmara nsɛm kwan so, ɛfiri sɛ ɛno na m’ani gye ho.”—Dwom 119:35.
Ahoɔden “Dane w’ani kyerɛ me, na dom me. Ma w’akoa ahoɔden.”—Dwom 86:16.